eTN amụma nzuzo | eTurboNews | Akụkọ Njem
Home » eTN amụma nzuzo
eTN amụma nzuzo
eTurboNews, Inc (eTN) na-ebipụta Nzuzo Nzuzo Internetntanetị a iji kọọrọ gị omume anyị gbasara nchịkọta na ojiji nke ozi ị na-enye anyị site na mmekọrịta nke weebụsaịtị a na weebụsaịtị ndị ọzọ eTN. Iwu a adabaghị na ozi nke ụzọ ndị ọzọ gbakọtara ma ọ bụ nkwekọrịta ndị ọzọ na-achịkwa.
Otu Anyị Si Anakọta Ozi
eTN na-anakọta ozi nkeonwe n'ọtụtụ ụzọ, gụnyere mgbe ị debanyere aha eTN na weebụsaịtị a, mgbe ị denyere aha na ọrụ eTN site na weebụsaịtị a, mgbe ị na-eji ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ eTN site na weebụsaịtị, mgbe ị gara na weebụsaịtị eTN ma ọ bụ weebụsaịtị nke ụfọdụ ndị mmekọ eTN, na mgbe ị banyere n'ọkwalite ma ọ bụ nzụlite dabere na Ntanetị nke eTN na-akwado ma ọ bụ na-elekọta.
Ndebanye aha onye ọrụ
Mgbe ị debanyere aha na weebụsaịtị anyị, anyị na-arịọ maka ịnakọta ozi dịka aha gị, adreesị ozi-e, koodu zip, na ụlọ ọrụ. Maka ụfọdụ ngwaahịa na ọrụ anyị nwekwara ike ịrịọ maka adreesị gị na ozi gbasara gị ma ọ bụ akụ azụmaahịa gị ma ọ bụ ego ha nwetara. Ozugbo ị debanyere aha eTN ma banye na ọrụ anyị, ị gaghị ama anyị.
Ndị ọrụ nwere ike ịhọrọ isonye n'ọtụtụ akwụkwọ ozi eTN (ọrụ email), site na ozi ọma kwa ụbọchị na ndị na-ebu ngwaahịa ndị na-ekpo ọkụ ọkụ. eTN na-anakọta ozi nkeonwe n'ihe banyere ndebanye aha na iji ụdị ọrụ ahụ.
Ndị ọrụ nwere ike ịhọrọ isonye na nkwalite na / ma ọ bụ asọmpi nkwado nke eTN na-eme site n'oge ruo n'oge maka ndị ahịa ya. eTN na-anakọta ozi nkeonwe n'ihe banyere ndebanye aha ndị ọrụ maka na isonye na nkwalite na asọmpi dị otú ahụ.
Mmemme Mmemme na Nzukọ Ọmụmụ
Ndị ọrụ nwere ike ịhọrọ isonye na mmemme agụmakwụkwọ na nzukọ ọmụmụ nke eTN na-eduzi site n'oge ruo n'oge. eTN na-anakọta ozi nkeonwe n'ihe banyere ndebanye aha ndị ọrụ maka na isonye na mmemme ndị a.
“Kuki” bụ obere ozi nke ihe nchọgharị gị na-echekwa na draịvụ kọmputa gị. eTN ma ọ bụ ndị mgbasa ozi ya nwere ike izipu kuki gị na kọmputa gị site na ihe nchọgharị gị. eTN na-eji kuki iji chọpụta arịrịọ peeji nke yana oge ọbịbịa onye ọrụ ọ bụla yana ojiji kuki na-enye anyị ohere ịnye ihe nchọgharị onye ọrụ ihe edepụtara maka mmasị na mkpa onye ọbịa yana ịkọwapụta nleta onye ọrụ na weebụsaịtị anyị. You nwere ike ịhọrọ ma ị nabata kuki site na ịgbanwe ntọala ihe nchọgharị gị. Younwere ike ịtọgharịa ihe nchọgharị gị iji jụ kuki niile ma ọ bụ kwe ka ihe nchọgharị gị gosi gị mgbe a na-eziga kuki. Ọ bụrụ n'ịhọrọ ịnabataghị kuki, ahụmịhe gị na weebụsaịtị na weebụsaịtị ndị ọzọ nwere ike belata ma ụfọdụ atụmatụ nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ etu esi chee.
eTN na-enweta ma na-edekọ ozi na ndekọ ihe nkesa na ihe nchọgharị gị, gụnyere adreesị IP gị, ozi kuki eTN, na ibe weebụ ị rịọrọ. eTN na-eji ozi a iji nyere aka chọpụta nsogbu na sava anyị, maka nchịkwa usoro, yana iji nyochaa mkpokọta weebụsaịtị anyị na mkpokọta. Enwere ike ịnakọta ozi ahụ ma melite ọdịnaya nke ibe weebụ anyị iji hazie ọdịnaya na / ma ọ bụ nhazi maka onye ọrụ ọ bụla.
Ọ bụrụ n ’ị na-azụ ihe site na webụsaịtị eTN, anyị kwesiri ị mata ozi ga - amata mmadụ dịka aha, adreesị ozi-e, adreesị nzipu ozi, nọmba kaadị akwụmụgwọ, na ụbọchị mmebi. Nke a na-enye anyị ohere ịhazi ma mezuo iwu gị ma gwa gị ọkwa gị. ETN nwekwara ike iji ozi a gwa gị ngwaahịa na ọrụ ndị metụtara ya. Agaghị ekekọrịta ma ọ bụ rere ozi kaadị akwụmụgwọ n'aka ndị ọzọ na-enweghị mmekọ maka ebumnuche ọ bụla na-enweghị ikike nkwupute gị, belụsọ na ọ dị mkpa ịhazi azụmahịa ahụ.
Ọ bụrụ n ’ịhọpụta inye anyị ozi nkeonwe anyị, anyị na-eji ya iji zipu ọrụ ịchọrọ. eTN nwere ike iji ozi nkeonwe n'ọtụtụ ụzọ gụnyere ihe ndị a:
o eTN nwere ike iji ozi nkeonwe iji kpokọta site na weebụsaịtị ya iji zipu nkwalite ozi-e ezubere iche maka ndị mgbasa ozi ya na ndị ọrụ ụlọ ọrụ.
o eTN nwere ike ikpokọta ozi gbasara gị nke anyị nwere yana ozi anyị nwetara n'aka ndị mmekọ azụmahịa ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ iji wepụta ngwaahịa na ọrụ nke nwere ike ịmasị ma baara gị uru.
o eTN nwere ike iji ozi nkeonwe iji kpọtụrụ ndị ọrụ banyere ịmegharị ndebanye aha na ọrụ eTN na ngwaahịa.
o eTN nwere ike iji ozi nkeonwe iji zipu ozi nke eTN ma ọ bụ ngwaahịa na ọrụ ndị mmekọ anyị site na usoro dịka email na / ma ọ bụ ozi nzi ozi.
Ọ bụrụ na ịnye ozi gbasara ego, anyị na-eji ozi ahụ iji nyochaa kredit gị ma nakọta ịkwụ ụgwọ maka nzụta, iwu, ndebanye aha, wdg.
o eTN nwere ike izipu ọkwa ngwaahịa ma ọ bụ akwụkwọ mbipụta pụrụ iche nye ndị na-edebanye aha na ntanetị.
Ọ bụrụ na isonye na mmemme agụmakwụkwọ eTN, nzukọ ọmụmụ ihe, ma ọ bụ mmemme ndị ọzọ na-emetụta oge, anyị nwere ike ịkpọtụrụ gị iji chetara gị oge na-abịanụ ma ọ bụ ozi ndị ọzọ gbasara mmemme ndị a.
o eTN na-eme ndị nyocha na / ma ọ bụ nyocha onye ọrụ iji mee ka ọdịnaya anyị dịkwuo mma nye ndị na-ege anyị ntị. Achịkọta ozi anakọtara na mgbe ụfọdụ a na-akọrọ ndị mgbasa ozi anyị, agbanyeghị, anyị agaghị ekenye ndị ọzọ ozi akọwapụtara nke atọ.
o eTN na-arụ ọrụ ọtụtụ webụsaịtị na-egosipụta ọdịnaya na ọrụ metụtara njem ya. eTN nwere ike ịkekọrịta ozi nkeonwe anakọtara site na ndị ọrụ nke weebụsaịtị ya n'ime gafee weebụsaịtị ndị a iji mee ka ndị ọrụ ya mma.
eTN nwere ọtụtụ ngwaahịa na ọrụ yana ya mere ọtụtụ email na ndepụta nkwalite. N’ịgbalị inye ndị ọrụ ohere imeziwanye òkè ha na ọrụ na nkwalite eTN, eTN na-enye ndị ọrụ ikike ịhọrọ ndepụta ma ọ bụ ngwaahịa nwere mmasị na nhọrọ ịpụ apụ bụ ngwaahịa na ojiji / ndepụta akọwapụtara. Nkwalite email niile ezitere na eTN na-enye njikọ nwepu aha na ala nke email ahụ nke ndị ọrụ nwere ike ịpụ na ngwaahịa na nkwalite akọwapụtara. Ọ bụrụ na ị nweta otu n’ime ozi ịntanetị ndị a ma chọọ iwepu aha biko soro ntuziaka ndị e nyere na email ma ọ bụ kọntaktị nke ọ bụla [email protected]
Site n’oge ruo n’oge anyị nwere ike iji ozi ndị ahịa maka ihe ọhụụ, ojiji ndị a na-atụghị anya ha egosighi na amụma nzuzo anyị. Ọ bụrụ na omume ozi anyị gbanwere n'oge ụfọdụ n'ọdịnihu anyị ga-etinye mgbanwe iwu na weebụsaịtị anyị.
Kekọrịta Ozi Anakọtara na Ndị Nke Atọ
Na mkpokọta, eTN anaghị agbazite, na-ere, ma ọ bụ na-ekekọrịta ozi nkeonwe gbasara gị na ndị ọzọ ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-abụghị ndị enyemaka belụsọ inye ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ịchọrọ, mgbe anyị nwere ikike gị, ma ọ bụ n'okpuru ọnọdụ ndị a:
o Anyị nwere ike ịnye ozi nkeonwe anyị banyere ndị ọrụ anyị tụkwasịrị obi na ndị na-ere ahịa na-arụ ọrụ na nnọchite nke ma ọ bụ na eTN n'okpuru nzuzo na nkwekọrịta ndị yiri ya na-amachibido ndị ọzọ iji ozi ahụ. Theselọ ọrụ ndị a nwere ike iji ozi nkeonwe gị nyere eTN aka ịgwa gị gbasara onyinye sitere na eTN na ndị ahịa anyị. Agbanyeghị, ụlọ ọrụ ndị a enweghị ikike nweere onwe ha iji ma ọ bụ kesaa ozi a.
Mgbe ị debanyere aha maka usoro agụmakwụkwọ, asọmpi, ma ọ bụ nkwalite ndị ọzọ nke ndị ọzọ na-akwado, a ga-enye ndị ọzọ ozi nkeonwe ma ọ bụrụ na edeghị ya na nkwalite ahụ.
o eTN nwere ike site n'oge ruo n'oge kesaa ozi nkeonwe dị ka adreesị ozi-e na ndị ọzọ tụkwasịrị obi na-ewepụta ọdịnaya nwere ike ịmasị onye ọrụ ahụ yana dabere na nhapụ ịpụ na akụkụ nke ndị ọzọ.
o Anyị nwere ike ịkekọrịta ozi nkeonwe ebe anyị nwere ezigbo okwukwe na ụdị omume ahụ dị mkpa iji rube isi na usoro ikpe, usoro ụlọ ikpe, ma ọ bụ usoro iwu ejiri rụọ ọrụ na eTN, ma ọ bụ iji guzobe ma ọ bụ gosipụta ikike iwu anyị ma ọ bụ ịgbachitere nkwupụta iwu.
o Anyị nwere ike ịkekọrịta ụdị ozi a ebe anyị nwere ezigbo okwukwe na ọ dị mkpa iji nyocha (ma ọ bụ nyere aka na nyocha nke), gbochie, ma ọ bụ mee ihe gbasara ọrụ na-akwadoghị, enyo enyo enyo wayo, ọnọdụ ndị metụtara egwu anụ ahụ. nke onye obula, mmebi nke usoro eTN ojiji, ma obu dika iwu choro.
o Ọ bụrụ na enwetara ma ọ bụ mekọrịta eTN na ụlọ ọrụ ọzọ, anyị ga-ebufe ozi gbasara gị na ụlọ ọrụ ọzọ na njikọ na nnweta ma ọ bụ njikọta.
Otu Mkparịta ụka
Otu mkparịta ụka email dị maka ndị ọrụ anyị na ụfọdụ weebụsaịtị anyị. Ndị sonyere kwesịrị ịmara na ozi ekpughere na ndepụta ndị a ka enyere ndị niile so na ya wee bụrụ ozi ọha na eze. Anyị na-atụ aro ka ị kpachara anya mgbe ị na-ekpebi igosipụta ozi ọ bụla gbasara onwe gị na ìgwè mkparịta ụka dị otú ahụ.
Ebe nrụọrụ weebụ a na-eji nlezianya na-akpachapụ anya iji kpuchido ozi nkeonwe gị. Mgbe anyị bufere ma nata ụdị ozi dị iche iche dị ka kaadị akwụmụgwọ na ozi ịkwụ ụgwọ, anyị na-edugharị ndị ọrụ na sava ụlọ ọrụ SSL (Secure Socket Layer) zoro ezo. N'ihi ya, a na-ebugharị data dị nro ị na-edebe na weebụsaịtị anyị dịka kaadị akwụmụgwọ na ozi ịkwụ ụgwọ na ntanetị.
eTN abụghị maka mmebi ọ bụla nke nchekwa ma ọ bụ maka omume ọ bụla nke ndị ọzọ na-anata ozi ahụ. eTN na-ejikọkwa n'ọtụtụ saịtị ndị ọzọ ma nwee mgbasa ozi nke ndị ọzọ. Anyị anaghị aza ajụjụ maka iwu nzuzo ha ma ọ bụ otu ha si emeso ozi gbasara ndị ọrụ ha.
Banyere Nzuzo Childrenmụaka
Ebuputaghi webusaiti eTN a ka umuaka jiri ya na ndi eTN n’amaghi ama n achikota umuaka. Ga-adị afọ 18 iji nweta ma ọ bụ jiri saịtị a.
Melite / Gbanwee data gi
Imelite adreesị email gị ma ọ bụ gbanwee mmasị email gị biko kpọtụrụ [email protected]
eTN nwere ikike, n'oge ọ bụla na enweghị ọkwa, ịgbakwunye, mgbanwe, melite ma ọ bụ gbanwee Iwu Nzuzo a, naanị site na ịdee ụdị mgbanwe, mmelite ma ọ bụ mgbanwe na weebụsaịtị. Mgbanwe ọ bụla dị otú a, melite ma ọ bụ mgbanwe ga-adị irè ozugbo na-atụgharị na weebụsaịtị. A ga-agwa ndị ọrụ maka mgbanwe nke Iwu Nzuzo a site na njikọ "emelitere dị ka nke" na weebụsaịtị eTN.
Kedu Ihe Ọzọ M Kwesịrị Mymara Banyere Nzuzo M Mgbe Onlinentanetị?
ETN weebụsaịtị nwere ọtụtụ hyperlinks na weebụsaịtị ndị ọzọ. Weebụsaịtị eTN nwekwara mgbasa ozi nke ndị ọzọ. eTN anaghị ahụ maka omume nzuzo ma ọ bụ ọdịnaya nke weebụsaịtị ma ọ bụ ndị mgbasa ozi ndị ọzọ. eTN anaghị ekerịta ozi nkeonwe ọ bụla ị nyere eTN na webụsaịtị nke eTN jikọtara ya, belụsọ dịka ekwuru ya na ebe ọzọ n'ime Iwu Nzuzo a, n'agbanyeghị na eTN nwere ike ịkekọrịta data nchịkọta na weebụsaịtị dị otú ahụ (dị ka mmadụ ole jiri saịtị anyị).
Biko lelee saịtị ndị ọzọ ahụ iji chọpụta iwu nzuzo ha. Mgbe eTN tinye ọdịnaya ndị ọzọ na otu n'ime ibe weebụ eTN ya, eTN ga-eji ezi uche dị na ndụmọdụ iji nye ndị ọrụ anyị ndụmọdụ na ha apụla na weebụsaịtị eTN ma na-abanye na weebụsaịtị ndị ọzọ na-achịkwa. Ndị ahịa / ndị ọrụ kwesịrị ịgụ ma ghọta amụma nzuzo ọ bụla edere na weebụsaịtị ndị ọzọ niile.
Biko buru n'uche na mgbe ọ bụla ị ji aka gị gosipụta ozi nkeonwe n'ịntanetị - dịka ọmụmaatụ site na email, ndepụta mkparịta ụka, ma ọ bụ ebe ọzọ - na ndị ọzọ nwere ike ịnakọta ma jiri ya. Na nkenke, ọ bụrụ na ịdee ozi nkeonwe gị n'ịntanetị nke ndị mmadụ nwere ike ịnweta, ịnwere ike ịnata ozi ndị a na-achọghị na ndị ọzọ.
Mee elu mee ala, ị bụ naanị ọrụ maka ijide nzuzo nke ozi nkeonwe gị. Biko kpachara anya ma nwee ọrụ mgbe ọ bụla ị nọ n'ịntanetị.
Ihe nzuzo nzuzo nke California gị
N'okpuru ndokwa nke iwu California, onye bi na California nke nyere ozi nkeonwe ya na onye ya na ya guzobere mmekọrịta azụmahịa maka ebumnuche onwe onye, ​​ezinụlọ, ma ọ bụ nke ezinụlọ ("Onye ahịa California") nwere ikike ịrịọ ozi gbasara ma azụmahịa egosipụtawo ozi nkeonwe n’aka ndị ọzọ ọ bụla maka ebumnuche ahịa nke ndị ọzọ. N'aka nke ọzọ, iwu na-enye na ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ahụ nwere iwu nzuzo nke na-enye ma ọ bụ ịpụ ma ọ bụ nhọrọ ịhọrọ maka ozi nkeonwe gị site n'aka ndị ọzọ maka ebumnuche ahịa, ụlọ ọrụ ahụ nwere ike ịnye gị ozi gbasara otu esi egosipụta nhọrọ ngosi gị.
N'ihi na saịtị a ezubere iji mee ihe na azụmaahịa azụmaahịa, onyinye a nke iwu California agaghị emetụta, n'ọtụtụ ọnọdụ, na ozi anakọtara.
Ruo n'ókè onye bi na California na-eji Saịtị a maka ebumnuche nke onwe, ezinụlọ, ma ọ bụ ezinụlọ, ịchọrọ ozi kpuchitere iwu, Saịtị a tozuru oke maka nhọrọ ọzọ. Dị ka ekwuru na amụma nzuzo anyị, ndị ọrụ nke saịtị nwere ike ịpụ ma ọ bụ pụọ na iji ozi nkeonwe gị site n'aka ndị ọzọ. Ya mere, anyi achoghi idobe ma obu gosiputa ndepụta nke ndi ozo ndi natara ozi nkeonwe gi n’ime afo gara aga maka ebumnuche ahia. Iji gbochie igosipụta ozi nkeonwe gị maka iji na ahịa nke ndị ọzọ na-ere ahịa, abanyela na ojiji dị otú ahụ mgbe ị na-enye ozi nkeonwe na saịtị. Biko mara na mgbe ọ bụla ị banyere iji nata nkwukọrịta nke oge site na ndị ọzọ, ozi gị ga-edobe iwu nzuzo nke ndị ọzọ. Ọ bụrụ n’ikpebie na ịchọghị ka ndị ọzọ jiri ozi gị mee ihe, ị ga-akpọtụrụ ndị ọzọ ozugbo, ebe ọ bụ na anyị enweghị ikike etu ndị ọzọ si eji ozi. Ikwesiri inyocha iwu nzuzo nke otu ọ bụla na-anakọta ozi gị iji chọpụta otu ụlọ ọrụ ahụ ga-esi nweta ozi gị.
Ndị bi na California na-eji saịtị a maka ebumnuche onwe ha, ezinụlọ, ma ọ bụ ezinụlọ nwere ike ịrịọ maka ozi ndị ọzọ gbasara nrube isi anyị na iwu a site na e-mail [email protected] Kwesịrị itinye nkwupụta ahụ "Ikike Nzuzo California gị" na ngalaba isiokwu nke email gị. Biko rịba ama na achọrọ anyị ka anyị zaghachi otu arịrịọ kwa ndị ahịa kwa afọ, anyị achọghị ịzaghachi arịrịọ ndị ọzọ site na adreesị ozi-e a.
Nkwenye gị na iwu a
Site n'iji weebụsaịtị anyị, ị kwenyere na nchịkọta na ojiji nke ozi site na eTN dị ka akọwapụtara na iwu a. Biko rịba ama na ojiji nke weebụsaịtị ahụ na-achịkwa Usoro na Ọnọdụ eTN. Ọ bụrụ na ị kwenyeghị na usoro nke Iwu Nzuzo ma ọ bụ Usoro na Ọnọdụ, biko egbula weebụsaịtị, ngwaahịa na / ma ọ bụ ọrụ.
Biko ziga ajụjụ ọ bụla gbasara amụma nzuzo nke eTN [email protected]
Ngwa mgbakwunye: Smush
Rịba ama: Smush anaghị emekọrịta na ndị ọrụ njedebe na weebụsaịtị gị. Nanị nhọrọ ntinye Smush nwere bụ na ndenye aha akwụkwọ akụkọ maka admins naanị. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịgwa ndị ọrụ gị nke a na iwu nzuzo gị, ịnwere ike iji ozi dị n'okpuru.
Smush na-eziga onyonyo na sava WPMU DEV iji bulie ha maka ojiji weebụ. Nke a gụnyere ịnyefe data EXIF. A ga-ewepu data EXIF ​​ma ọ bụ laghachi dị ka ọ dị. A naghị echekwa ya na sava WPMU DEV.
Smush na-eji ọrụ email nke atọ (Drip) iji zipu ozi ịntanetị na onye nchịkwa saịtị. E zigara adreesị email nke onye nlekọta na Drip na ọrụ ahụ na-edozi kuki. Naanị onye nchịkwa ozi na-anakọtara site na Drip.